Archive du 20190328
Nirefodrefotra ny varatra 3 maty teo no ho eo, 2 naratra mafy
Olona 3 no indray maty tsy tra-drano teo no ho eo, ary 2 kosa naratra mafy ka nentina haingana novonjena tany amin’ny hopitaly satria tena nahiana ny ainy.
Andry Rajoelina Tena tsy mahafehy firenena
Nisy taratasy niparitaka teny amin’ny faritr’Antehiroka omaly fa ho avy hanafika ny dahalo, nihorohoro ny mponina teny Mamamba, Amparoratra sy Ambohijanahary Antehiroka nahare azy io.
Fiarahana kandida sy ny filoham-pirenena Vato mandondona an-dRajoelina
Miteraka resabe amin’izao ny fisiana vondrona politika mandrotsaka kandida ho depiote mampiasa ny anaran’ny filoham-pirenena ankehitriny, Andry Rajoelina, ao anatin’ilay vondrona entina hampandaniana ny kandidan’izy ireo.
Miaka-pofona ny mpiasan’ny “Domaine” Nanome 72 ny fanjakana
Nanao fanambarana ny sendikan’ny “Controleur des domaines”, ny sendikan’ny “Assistant Rédacteur des Domaines ary ny mpiara-miasa aminy rehetra manerana ny Nosy noho ny fampidirana am-ponja vonjimaika ny naman’izy ireo.
Kaominina Alasora sy Carry le Rouet Frantsa Matotra ny fiaraha-miasa
Tao anatin`ny roa taona dia nisy fiaraha-miasa teo amin`ny kaominina Alasora sy ny kaominina Carry Le Rouet any Frantsa izay mampifandray mpianatra sy ankizy tanora ao anatin’ireo kaominina roa ireo.
Federasiona Malagasin’ny tsipy kanetibe Manan-kery avokoa ireo fifaninanana karakaraina rehetra
Tetsy amin’ny “Boulodrome Paddock Mahamasina”, omaly alarobia 27 martsa 2019, no nanambaran’ny mpikambana roa ao amin’ny FMP « Federasion’ny tsipy kanetibe Malagasy »,
ABQ rugby Nitohy ny fankalazana ny faha-15 taona
Taorian’ny fotoam-panokafana notontosaina teny amin’ny Chapelle Info Centre de la Salle teny Soavimbahoaka ny sabotsy 23 martsa 2019 teo dia notohizana
Miandry kabary e !
59 taona amin’ity taona ity no hankalazana ny fahaleovantenam-pirenena. 61 taona ny repoblika voalohany. 72 taona rahampitso kosa no hahatsiarovana ny raharaha 29 martsa 1947.
Fampiroboroboana ny tontolon’ny fandraharahana Hizara traikefa ny Belza
Amin’ny alatsinainy 20 ka hatramin’ny sabotsy 25 meyy ho avy izao dia hanatanteraka iraka any amin’ny Nosy La Réunion, Maorisy ary eto Madagasikara ireo solontenan’ny orinasa avy any Belza.
Famotsorana an’i Haja kidnapping Taratry ny fanjakan-jiolahy eto ?
Nomena fahafahana vonjimaika i Manantena Hajanirina Dina, izay voarohirohy tamina raharaha fakana an-keriny teratany karana in-droa nisesy.
Beravina Analavory Dahalo 16 namono mpivarokena
Efa-bavy tamin’ireo 16 no voasambotry ny zandary tao Beravina, Analavory, distrikan’i Miarinarivo, ny talata 19 martsa 2019 lasa teo. Famonoana mpivarokena iray sy ny vadiny nitranga ny hariva tokony ho tamin’ny 7ora sy fahahefany no antony nisamborana azy ireo.
Fahasalaman’ny eny sy ny zaza Nanome vola 4,5 tapitrisa Euros ny Japoney
Nanome 3,2 tapitrisa euros ny Japoney, izay haompana amin’ny tontolon’ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza. 1,3 tapitrisa euros kosa ho fampitaovana ny fahitalavi-panjakana TVM, raha ny fantatra nandritra ny fihaonan’ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina sy ny minisitra Parlemantera lefitra japoney misahana ny raharaham-bahiny Kenji YAMADA teny Iavoloha omaly.
Sakafo miditra eto Madagasikara Misy manala ny otrikainy
Notanterahana omaly tetsy amin’ny Carlton Anosy ny atrikasa momba ny fanjarian-tsakafo eto Madagasikara izay nandraisana sehatra iraisam-pirenena maromaro miantsehatra amin’izany toy ny ONN, PAM, BASF.
Mpiasan’ny orinasa SIRAMA Miandry ny vahaolana avy amin’ny fanjakana
Niakatra aty Antananarivo mihitsy ireo solontenan’ny mpiasan’ny orinasa SIRAMA Nosy Be sy Brickaville hangataka fihaonana amin’ny fitondram-panjakana.
Tolom-panafahana 29 martsa 1947 Mihamangina ny fahatsiarovana
29 martsa 1947 – 29 martsa 2019. Feno 72 taona rahampitso ny nisian’ny raharaha 29 martsa 1947.